Nepalistudio » सन् २०१८ तपाइकाे लागि कस्ताे छ ? हेर्नुहाेस् वार्षिक राशिफल सन् २०१८ तपाइकाे लागि कस्ताे छ ? हेर्नुहाेस् वार्षिक राशिफल – Nepalistudio
सन् २०१८ तपाइकाे लागि कस्ताे छ ? हेर्नुहाेस् वार्षिक राशिफल
वर्षको प्रारम्भमा कन्या लग्न रहेको छ । लग्नपति मानिएको बुध ग्रह पराक्रम स्थानमा शत्रु मङ्गलको घर बृश्चिक राशिमा रहेर वर्षको प्रारम्भ भएको छ । उता भाग्यपति शुक्र पनि आफ्नो परम शत्रु बृहस्पतिको घरमा केन्द्रवर्ती भएर बसेको देखिन्छ । त्यसैले विश्वले केही आशा र केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । नयाँ वर्ष २०१८ बृश्चिक राशिमा पर्ने नेपाल र धनु राशिमा पर्ने भारत दुबै देशले मिश्रित फल प्राप्त गर्नेछन् । वर्षको प्रारम्भमा रहेको ग्रहहरूको शुभताको प्रभावले आर्थिक प्रगति, योजनाको निर्माण, जनतामा महत्त्वाकाङ्क्षा र उल्लासको अभिबृद्धि हुने सङ्केत छ । विकसित र ठूला राष्ट्रहरूले कुनै नयाँ परीक्षण र अन्वेषण सुरु गर्नाले आर्थिक पक्षमा नयाँ आशा जाग्ने सम्भावना देखिन्छ । साथै धनु राशिमा रहेको शनिश्चर अप्रिल १७ देखि सेप्टेम्बर ०४ सम्म बक्री रहने भएकाले उक्त अवधिमा पूर्वी एशियाका कतिपय स्थानमा प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्न सक्छ, नेपाल र भारतमा जनताहरूले विद्रोह गर्ने र सामाजिक सद्भाव बिथोलिने खतरा देखिन्छ । बृहस्पतिका निमित्त तुला राशि शत्रुगृह भएकाले उक्त ग्रहको गतिमा अतिचार र बक्रतासमेत देखिने भएकाले समाज र आमजीवनमा सन् २०१८ जालझेल, खुट्टा तानातान, ठगी, फट्याइँ र चाकरीचाप्लुसीको आधिक्य रहेको वर्ष नै हुनेछ ।
बृहस्पति बृश्चिक राशिमा रहेको समय फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्म र अक्टोबरपछि बाँकी समय सरकार कडिकडाउ भएर जाने सङ्केत देखिन्छ तर अन्य समयमा सरकार र प्रतिपक्षका बीचको जुवारी यथावत रहने छ । दलहरू आपसी गुटबन्दीमा रुमल्लिने छन् । चन्द्रमाको अधिकार क्षेत्र मानिएको कर्कट राशिमा राहु ग्रह उपस्थित हुनाले गृहिणीहरूमा चिडचिडेपना र अशान्ति व्याप्त हुनेछ । बृद्धावस्थाका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यसमस्या परिवारका सदस्यहरूका लागि चिन्ताको विषय बन्नेछ । अप्रिलदेखि अगस्टसम्म शनिश्चर ग्रहको बक्रताका कारण बलियो र अशान्त ऊर्जा शक्तिशाली हाबी बन्ने देखिन्छ । बृश्चिक, धनु र मकर राशि तथा मकर र कुम्भ लग्नका जातकले उक्त समयमा धनमालको नोक्सानी गर्नुपर्ने वा शारीरिक चोटपटकको विकृति सहनु पर्ने हुन सक्छ । महँगी बढ्ने छ, भ्रष्टाचारमा बृद्धि हुनेछ । त्यस्तै धनु राशिमा शनि बक्री रहेको समय (अप्रिल १७ – सेप्टेम्बर ०४) मा पर्याप्त वर्षा नहुनाले पूर्वी तराईका साथमा भारतको अधिकांश भागमा अनिकाल र सुखाले जनजीवन आक्रान्त हुनसक्छ । शनिको बक्रताका कारण साना र ठूला राजनैतिक दल, उच्च र निम्न वर्ग आदिका बीचमा रहेको असमझदारी र दूरी अझ बढ्दै जाने सङ्केत छ । राज्य पक्षले जनसरोकारका विषयमा चासो दिन सक्दैन । बृहस्पतिको बक्रता र अतिचारका कारण धार्मिक र बौद्धिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि अनेकानेक बाधा र आरोहअवरोहको सामना गर्नुपर्छ । आडम्बर र पाखण्डले प्रश्रय पाउने छ । विशेष गरी मार्चदेखि जुलाईसम्म झैझगडा, विवाद र तनावले ग्रस्त वातावरण देशले ब्यहोरी रहने परिस्थिति छ । शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा आशा गरेअनुरूप सफलता मिल्दैन । बुद्धिजीविमाथि तस्कर र राजनीतिज्ञ हाबी हुनेछन् ।
राशिफल २०१८समग्रमा व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन र व्यवसायिक परिस्थितिमा राम्रो सफलता हासिल हुने वर्ष छ, सन् २०१८ । कतिपय राम्रा र आनन्ददायी क्षणहरूको आगमन हुने सङ्केत छ । व्यक्तिगत र पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण रहने छ । लामो समयदेखि दाम्पत्यजीवनमा रहेका, जीवनसाथी वा पार्टनरसिपको चाहना राख्ने वा साझेदारी काम गरिरहेकाहरूले खासगरी वर्षको पूर्वार्द्धमा भाग्योन्नति गर्ने अवसर पाउने छन् । हडबड र शीघ्रता गर्नेहरूले अप्रिलदेखि अगस्टसम्म आर्थिक नोक्सानी र चोटपटक व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ, साथै उक्त अवधिमा बृद्धबृद्धाले रोग, शोक र अपमान सहनुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ । पेसा वा रोजगारीको उन्नतिका लागि प्रयासरत व्यक्तिहरूले मिहिनेत र परिश्रममा विश्वास गर्नु जाति हुन्छ । बालस्वास्थ्यमा पनि कुनै ठूलो जोखिमको सम्भावना छैन । तर सुरुको दुई महिना र अगस्ट, सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा यौनव्यभिचारमा बृद्धि हुनेछ, साथै उक्त समयमा कला, मनोरञ्जन र भोगविलाससम्बद्ध व्यवसायीले कमजोरीको अनुभूति गर्नेछन् । अब मेषादि विभिन्न राशिका आम मानिसले यस वर्ष प्राप्त गर्ने उपलब्धी वा झेल्नुपर्ने निराशाका बारेमा चर्चा गरौं ।